Google wuxuu kugula dhawaaqayaa adiga $ 1B Barnaamijka Wadaagga Dakhliga | Martech Zone
Waa ma run, kaliya isku xidho sed.
Metacafe, nidaam raadin iyo darajayn loogu talagalay fiidiyowyada, kaliya dhaafey $ 1,000,000 dakhliga la wadaago abuurayaasheeda. Mike wuxuu soo wariyay in Revver uu sidoo kale ku dhacay $ 1,000,000 dakhliga la wadaago sanadkan sidoo kale.
Waan dhaleeceeyay Weerarka Google ee ku saabsan bixiyayaasha waxyaabaha ku jira yaa dalbaya lacag bixinta meelaynta isku xidhka. Michael Graywolf sidoo kale wuu leeyahay… isaguna waa qaadashada websaydhada waaweyn si loogu hawlgaliyo godadka Google Powers-That-Be.
Google waxay sheeganeysaa inay si fudud isku dayayso inay ilaaliso natiijooyinka raadinta dabiiciga ah run ahaantii dabiici ah. Aagga cawlan ee Shuruudaha Adeegga Google ayaa sii wadaya inuu xumaado, in kastoo. Dhawaan, Matt Cutts ayaa laga yaabaa inuu soo jeediyay in DHAMMAAN xiriiriyeyaasha boostada la kafaala qaaday waa in sidoo kale si sax ah loogu calaamadeeyaa sumadaha nofollow - maahan oo keliya bixiyaha xiriiriye bixiyaha ah.
Aniga oo ah mid ka mid ah 'bixiyeyaasha mawduucyada', waxaan u muuqdaa inaan u fiirsado xiriiriyeyaasha la bixiyay wax yar si ka duwan. Sida ay Metacafe iyo Revver u aqoonsadeen in aysan iyagu lahayn ganacsi soconaya la'aanteed bixiyeyaasha la xiriira, waxaa laga yaabaa in Google sidoo kale.
Haddii Google ay dhab ka ahayd baabi'inta xiriiriyeyaasha lacagta la siiyay, markaa waa inay la wadaagaan dakhliga ku jira maadadeyda dabiiciga ah ee ay ka faa'iideysanayaan (iyagoo ku calaamadeynaya xiriiriyeyaashooda ay kafaala qaadeen). Maxaad iigu bixin la’dahay mugga maaddooyinka waaweyn ee aan u oggolaado Google inay ku siiso dadka isticmaala?
Google ma leh internetka, dadweynow. Waa tusmadaada, ma ahan tan Google. Waxaan aad ugu mashquulsan nahay qulqulka si aan u helno dareenka Google nuska waqtiga aan ujecelno tan. Google waxay qabatay shaqo heer sare ah oo naftooda 'ka sareysa' qof kasta oo kale shabakadda.
Laga yaabee inay tahay waqtigii Mashiinka Raadinta cusub oo leh qaab ganacsi cusub?
Tags: qoda dadkafaahfaahinta dmarcdofollowemaylka emaylkatirakoobka dadka ee facebookgoogle iyo tirada dadkaisku xidhka dadkatirakoobka dadkadib-u-habeynta dadkarel = anigaSliderhababka ugu wanaagsan ee warbaahinta bulshadawarbaahinta bulshada ee tirakoobka dadweynahatirakoobka warbaahinta bulshada
PageRank: Aragtida Newton ee Cufsi Jiidashada
WordPress: La Xiriirinta Boostada La Xiriira
30, 2007 at 2: 18 PM
Weligay ma maqlin metacafe ka hor inta aanan yeelan barnaamij ku-xidhan waxaan maqlay dib-u-celinta barnaamijka dakhliga ee la wadaago oo bishan aan sameeyay ku dhowaad $ 40, taas oo ka badan intii aan ku sameeyay Google adsense go Fig. Waxaan aaminsanahay in google ay tahay inay lahaato waxyaabaha la wadaago ee natiijooyinka dabiiciga ah sidoo kale waxaan aaminsanahay inay tahay inay lacag ka helaan youtube-ka dadweynaha oo dhan halkii ay ka ahaan lahaayeen xubno kooban
30, 2007 at 3: 06 PM
Waxaan aqriyay maqaallo badan oo xun markii ay dadku ka cawdaan siyaasadda xiriirinta bixisay ee Google iyo qiimeynta dabiiciga ah. '
Maqaalkani waa midka kaliya ee sharxaya waxyaabo badan oo keenaya xaqiiqooyin dhab ah.
Dhankayga waxaan ka jeclaan lahaa inaan ku taageero wax kasta oo aad sheegayso.
30, 2007 at 4: 28 PM
Labada shirkadood ee Google iyo Yahoo labaduba waxay ku soo rogeen sharciyo dhowr ah dadka isticmaala ee ka faa'iideysanaya kaliya Google iyo Yahoo ee ma ahan bulshada isticmaala. Sida iska cad waad saxan tahay Internet Internetka iyo waxyaabaha ay dul dhigaan isticmaalayaashu waxaa iska leh isticmaalayaasha, maahan cinwaanada iyo makiinadaha wax raadinta. Caqabada ayaa ah in sidii caadada u ahayd, lacagta la shubo ay tahay waxa dhaqaajinaya nidaamka ilaa iyo inta ay jiraan kuwa isku dayaya inay ka faa'iideystaan ​​helitaanka dhaqsi deg deg ah, waxay lahaan doonaan gacan sarreysa ilaa dowlada word eraygaas xun 'talaabooyinka… go sawirka .
Waad ku mahadsantahay hadalkaaga.
30, 2007 at 6: 23 PM
Tukuhu waxay ku yimaadaan guriga si ay u fadhiistaan! Heh!
Waxaan ahaa ka digtoonow Google muddo!
30, 2007 at 6: 32 PM
Sidoo kale, halkan aad ayey ugu habboon tahay: buugga aan ugu jeclahay (weligiis?)Shuruucda Cusub ee Dhaqaalaha Cusub”Waxaa qoray Kevin Kelley oo ka hadlaya sida“ superwinners ”ay uga faa’iideystaan ​​deegaanka“ ku guuleysiga-ugu-qaadashada badan ”dhaqaalaha shabakadda Cutubka 2aad oo aad ka akhrisan karto khadka tooska ah. Isaga (iyo buugga oo dhan) ayaa runtii mudan in la akhriyo. Oh, BTW, waxaa la qoray ka hor Google xitaa ma jirin (ama ugu yaraan ka hor intaan si fiican loo aqoon.)
2, 2011 at 2: 57 AM
Waxaa laga yaabaa inay tahay waqtigii Mashiinka Raadinta cusub oo leh qaab ganacsi cusub? Waxaan u egnahay inaan ilaawno sida cusub iyo xaalad qulqulaya internetka. Waxaan xasuustaa oohinta maalintii Northern Light ay xirtay raadinta dadweynaha… waana KELIYA marka laga eego dhinaca macaamiisha. Wax walbaa waa suurtagal oo xaaladdan rajo ah, laakiin waxaan u maleynayaa in Google ay ku jirto "aad u weyn in lagu guuldareysto" qaybta… maxaa yeelay sidaad u sheegtay… iyagu waa hoggaamiyeyaasha sababta oo ah macaamilku "sidaas ayuu ula dhaqmaa" iyagaana si farxad leh ugu qasbay. Si aad u qurxoon isla sidii ay bulshooyinku had iyo jeer u fikiri jireen - “ah, iska dhaaf oo aniga ha la ii daayo”. Si murugo. Waad ku mahadsan tahay maqaalka.
2, 2011 at 2: 59 AM